Hepa Pepa Mota Kabhini Firita Yakakwira Yekutanga Kushanda Kwakakodzera ZX330-3 Excavator, China Hepa Pepa Mota Kabhini Firita Kumusoro Kwekutanga Kushanda Kwakakodzera ZX330-3 Excavator Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - TAKUMI AUTO CHIKAMU
Hepa Pepa Kabhini Kabhinari Gadzira Inosimudzira Pakutanga Kukodzera ZX330-3 Excavator
Yakagadziriswa Carbon Car Cabin Filter, HONDA Auto Cabin Firita Inotsiva Yakachengeteka Zvinyorwa
Mhepo Inonatsa Mota Kabhini Sefa Pepa Chinyorwa Filtrate Guruva Rakakodzera 2010 LEXUS LFA Rio 9713
PP Meltblow YeMotokari Cabin Mafirita Asina - Chefu OE HAPANA CF10134 YeHONDA
BMW Yakachena Cabin Mhepo Sefa Yakagadziriswa Carbon Mucheka 64319171858 99.8% Chekutanga Kushanda
Toyota Corolla Mota Cabin Sefa, Chena Injini Kabhini Sefa Inotsiva Anti Ngura
VW Auto Cabin Firita Inotsiviwa Inogadzikana Pepa Heat Welding 6200 Miles Warranty
HV Pepa Mota Kabhini Firita, Rori Kabhini Mhepo Sefa Yekutsiva OEM Anogona
OE HERE: K1029 8143691 81436917 8144430 Application: ZX330-3 Excavator, Rori
Pakutanga Kubudirira: > = 99.8 Mutengo Range: Yakakwira Kubudirira Kabhini Mhepo Sefa
Material: Hepa Pepa Kana Carbon Pepa
Injini mukuita basa rekutora mweya wakawanda, kana mweya usina kusefetwa, mweya wakasimudzwa guruva rakayamwa mukati mekirinda, rinosimudzira iro pisitoni boka uye humburumbira kupfeka. Zvidimbu zvakakura pakati pepiston uye humburumbira, zvinokonzeresa chakakomba "dhonza humburumbira" chiitiko, icho chakaoma uye jecha munzvimbo yekushanda chakanyanya kukura. Sefa yemhepo yakaiswa mukati mecarburetor kana pombi yekudyira pamberi peyeya yemhepo inoburitsa basa reguruva, jecha, kuona kuti humburumbira muhuwandu hwemhepo yakachena.
Mumakumi ezviuru zvezvikamu zvemota, iyo yekuchenesa mweya chikamu chakazvininipisa, nekuti haina hukama chaihwo nehunyanzvi hwekuita kwemota, asi mukushandisa chaiko kwemotokari, firita yemhepo pamota ( Kunyanya injini) ine hukuru hukuru pahupenyu. Kune rimwe divi, kana pasina mweya wefirita mhedzisiro, injini inofemereka yakawanda guruva, zvidimbu zvemhepo, zvichikonzera zvakakomba injini humburumbira kupfeka; rimwe divi, kana kushandiswa kwemaitiro, kwete kwenguva yakareba yekuchengetedza, firita yemhepo Iyo firita yechinhu inozozadzwa neguruva mumhepo, iyo isingori chete kudzora kugona kwekuchenesa, asi zvakare inotadzisa kuyerera kwemhepo, zvichikonzera mumusanganiswa wakakora uye injini haisi kushanda nemazvo. Naizvozvo, zvakakosha kuti uchengetedze firita yemhepo panguva.
Mafirita emhepo anowanzo kuve mapepa uye oiri yekugezera mhando mbiri. Sezvo bepa firita ine yakakwira filtration kunyatsoshanda, kurema uremu, yakaderera mutengo, nyore kugadzirisa, nezvimwewo, rave richishandiswa zvakanyanya. Pepa firita firita kunyatsoshanda inosvika 99.5% kana kupfuura, oiri yekugezesa firita kunyatsoshanda mune yakajairwa kesi yeiyo filtration kushanda kwe 95-96%. Mota mweya firita inoshandiswa zvakanyanya mumapepa mafirita, uye yakakamurwa kuita yakaoma uye yakanyorova maviri. Yeye yakaoma firita, kana yakanyikwa mumafuta kana hunyoro, kusefa kwefirita kunowedzera zvakanyanya, saka yakachena haifanire kubata mvura kana mafuta, kana inofanira kutsiva zvidimbu zvitsva.
Kana injini ichimhanya, mweya wekutora uri pakati, zvichikonzera kudengenyeka kwemhepo mudzimba dzinochenesa dzimba. Kana mweya wemhepo ukachinja zvakanyanya, zvinogona kukanganisa kunwa kweinjini. Uye zvakare, ino nguva ichawedzerawo ruzha rwekudya. Kuti udzvinyirire ruzha rwekudya, huwandu hwenzvimbo yekuchenesa mweya hunogona kuwedzerwa, uye mamwe ma spacers akarongedzwa imomo kudzikisa ruzha.
Sefa yemhepo firita yakakamurwa kuita yakaoma firita uye nyoro firita maviri Yakaomeswa firita yekusefa bepa kana isina-yakarukwa machira. Kuti uwedzere mweya kuburikidza nenzvimbo, yakawanda yefaera inogadzira yakawanda madiki madiki. Kana iyo firita yashatiswa zvishoma, unogona kushandisa yakamanikidzwa mweya ichivhuvhuta, apo firita inoshatisa inofanira kutsiviwa kana iyo nyowani nyowani.